Dowladda oo Baro koontorool Cusub ka sameeysay Muqdisho - Awdinle Online
Dowladda oo Baro koontorool Cusub ka sameeysay Muqdisho
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale ayaa waxaa ay xalay kormeer ku tageen Baro koontorool oo gaadiidka lagu baaro, kaas oo dowladda Soomaaliya ay ka sameysay Magaalada muqdisho.
Baraha koontorool ayaa waxaa ay yihiin goobihii dhawaan dowladda Soomaaliya ay dhagxaanta ka qaaday, kuwaas oo ay ku sugan yihiin Ciidamo Boolis ah oo gaadiidka ku baaraya.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay booqdeen ilaa 15 Baro-koontoroolool oo ku yaalla inta u dhaxeysa Bariga Magaalada Muqdisho ee degmada Kaaraan ilaa Galbeedka Muqdisho oo ah degmada Kaxda.
Waxaa uu sheegay Taliyaha in u jeedka kormeerkooda uu ahaa inay ogaadaan sida ay Ciidamada Booliska u sugayaan Amniga Magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in dadka Shacabka ay soo dhaweeyeen furitaanka wadooyinka Muqdisho.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa si kala gooni gooni ah ula kulmay saraakiisha ku sugan Baraha koontorool, waxaana uu ka dalbaday in dadka Shacabka ahna aan la dhibin, isla markaana loo fududeeyo marista wadooyinka.
13-kii Bishaan ayaa dowladda Soomaaliya waxaa ay muqdisho ku qabatay munaasad lagu furayay wadooyinka Magaalada Muqdisho, waxaana jirtay cabasho gaadiidleyda qaar kasoo yeereysay, kuwaas oo sheegayay in wadooyinka dhagxaanta laga qaaday Ciidamada ku sugan ay gaadiidka weeydiinayaan lacag ay wadada ku marayaan.
Previous articleWasiir Goodax Barre oo looga yeeray Golaha Shacabka arrin xasaasi oo loo heysto
Next articleAgaasime Cusub oo loo Magacaabay Madaxtooyada Galmudug